Ike obibi nke ụwa | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ike obibi nke ụwa
Adrian | | Ike ikuku, Ike imeghari ohuru
La ike ikuku Ọ bụ akụkụ nke otu ike ndị ọzọ nwere ike imeghari.
Typedị ike a abụghị ihe ọhụrụ, mana taa enwere mmasị ka ukwuu ụwa na iji akụ a.
La ike ikuku mmiri na-eji okpomọkụ okike site na ala site na mmiri nke ala nke di ma obu ihe kariri 4000 mita di elu ma ebe onodu oku di elu karie ala.
Usoro a dị mfe, ọ dị mkpa ịkụgharị ụwa na mpaghara mpaghara ebe ọnọdụ okpomọkụ dị elu, mgbe ahụ, a na-akpọ mmiri na uzuoku wee duzie ya na turbine jikọtara na igwe na-eweta ike.
Mmasị dị ukwuu na ume dị ọcha na-akpata ọganihu dị ukwuu na ụdị ike a. Uru kachasị ha nwere bụ na ọ bụ emere maka mmeghari ohuru, na-enye ike na-agbanwe agbanwe, enweghị isi nje ma choro obere oghere iji wụnye a geothermal osisi.
Ihe ọghọm nke isi iyi a bụ na naanị n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa dị ọkụ ọkụ ma ọ bụ mpaghara ala kwesịrị ekwesị iji mepụta ume n'ụzọ dị otú a ma ọnụahịa ụlọ ahụ dị elu.
N'ime ụwa enwere ihe karịrị 250 geothermal osisi na e nwere ọrụ dị iche iche ma ọ bụ osisi dị iche iche a na-ewu n'ụwa niile n'ihi na ụdị isi iyi a na-enyere aka ịbawanye ikike ike nke mba niile.
Ihe omumu nke geothermal nwere ike buru oke ihe nmasi mara nma Mba dara ogbenye inwe ike inweta ume ebe ọ bụ na akụkụ buru ibu nke mpaghara ụwa ndị nwere àgwà geothermal bụ nke mba ndị na-emepe emepe, ọkachasị na Afrika, Asia na akụkụ nke South America ha nwere nnukwu ikike.
Ike Geothermal na-abawanye ikike ike nke nnukwu mpaghara ụwa na mba dịka China, na-enye nde mmadụ ọkụ eletrik.
Ọ dị mma ijikọta osisi geothermal na ụdị ndị ọzọ dị iche iche iji nwekwuo ike ume.
Iji uzo ozo eme ihe kwesiri ekwesiri inye aka wezuga nsogbu nke gburugburu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike ikuku » Ike obibi nke ụwa
Zaghachi ka Elizeth
nzuzu ps elizabeth